Daawo Sawirrada-Ciidamada Puntland iyo Galmudug oo lakala durkiyey. – Radio Daljir
Daawo Sawirrada-Ciidamada Puntland iyo Galmudug oo lakala durkiyey.
Noofember 18, 2016 8:20 b 0
Raysal wasaaraha Soomaaliya iyo General Siciid Dheere oo ah taliyaha ciidanka difaaca Puntland iyo guddiyada saraakiisha labada dhinac ee Galmudug iyo Puntland ayaa ku guulaystay in la kala qaado ciidamada isku horfadhiyay galbeedka magaalada Gaalkacyo, waxaana la kala fogeeyay masaafo 4km.
Madaxweyne Gaas waxaa kale oo lagu wadaa inuu tago koontaroolka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo, halkaas oo lagu dhameystirayo hannaanka kala durkinta ciidamada.
DHEGEYSO-Barnaamij gaar ah oo ku saabsan waxyaabaha sababa soo noqnoqoshada abaaraha.